तपाईंको पीसी को सामान्य गति कम गर्न धेरै कारक हो। र यो सधैं भाइरल सफ्टवेयर को आक्रमण को एक परिणाम, रूपमा सामान्यतः विश्वास छ छ। सबै भन्दा साधारण कारण clogging र अत्यधिक खण्डीकरणको क्रमलाई रजिस्ट्री र प्रणाली फाइलहरू क्षति रूपमा सेवा गर्न सक्छन्। पनि pirated सफ्टवेयर को प्रयोग, ढिलो होस् वा पछि आफ्नो कम्प्युटर सुस्त पुष्टि। तर यी समस्या को कुनै पनि तपाईंको अवस्था लागू गर्दैन भने, त्यसपछि निश्चित लागि निम्न सुझावहरू तपाईं देखाउन कसरी आफ्नो कम्प्युटरको प्रदर्शन वृद्धि गर्न हुनेछ।
यसलाई आफ्नो कम्प्युटर को प्रदर्शन कसरी वृद्धि गर्न आउँदा, भाइरस सोच्न सुरु पहिलो कुरा। पहिले नै stipulated रूपमा भाइरस, हुनत, सधैं धीमा लागि मुख्य कारण हो, तर राम्रो कुराले तिनीहरूलाई लागि प्रतीक्षा लायक छैन। तसर्थ, सबैलाई बिल्कुल आवश्यक उपलब्ध विरोधी-भाइरस छ छ। र तपाईंले यसलाई धेरै महँगो छ लाग्छ भने, तपाईं गहिरो गलत छन्। नेटवर्क मा निःशुल्क एन्टिभाइरस सफ्टवेयर प्रशस्त छन्। उदाहरणका लागि, एन्टिभाइरस सफ्टवेयर Avast वा Avira को घरेलू संस्करण तपाईं आफ्नो मिसिन बसाबास गर्नु कि भाइरस र स्पाइवेयर को 95% को छुटकारा प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ, र एक मुद्रा आवश्यक छैन।
Defragment र आफ्नो रजिस्ट्री सफा
जब सफ्टवेयर स्थापना Windows रजस्ट्री प्रविष्टिहरू मा यो सेटिङ भण्डारण छन्, र एक समय पछि, बकवास को यस्तो ठूलो रकम बस सिस्टम को सामान्य संचालन हस्तक्षेप गर्न थाल्छ। चेक गर्न आफ्नो कम्प्युटर को प्रदर्शन र तय रजिस्ट्री त्रुटिहरू, उदाहरण, TuneUp वा CCleaner लागि, विशेष कार्यक्रम सेट।
Defragment र डिस्क क्लिनअप
यो सिस्टम को गति हार्ड ड्राइभ प्रदर्शन को गति निर्भर कुनै गोप्य छ। जब तपाईंको कम्प्युटर पूर्ण किनभने स्पेस कमी को, चलचित्र, संगीत र अनावश्यक कार्यक्रम भरिएको छ, को पाठ्यक्रम, पतन र गति। तपाईं आफ्नो कम्प्युटर को प्रदर्शन कसरी वृद्धि गर्न सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने, विन्डोज 7, यो तपाईंलाई मदत गर्नेछ किनभने प्रणाली को नियन्त्रण प्यानल मा सफाई र लागि निर्मित विकल्प को एक विशाल राशि छ डिस्क defragmentation। तर अन्य प्रणाली मालिक, मुक्त सफ्टवेयर खोज्नुपर्छ किनभने निर्मित उपकरण एक सजिलै देखिने प्रवेग प्रदर्शन को लागि बलियो पर्याप्त छैन।
स्थापना रद्द र सबै अतिरिक्त मेटाउन
कसरी प्रदर्शन वृद्धि गर्न प्रभाव तुरुन्तै देख्न सकून् भनेर तपाईँको कम्प्युटरको? इतिहास र क्यास स्पष्ट, सबै मेटाउन , अस्थायी फाइलहरू सबै अनावश्यक कार्यक्रम र आवेदन हटाउन र त्यसपछि कम्प्युटर फेरि सुरु, र तपाईं पहिले नै स्थापित छ भने कुनै पनि दृश्य विषयवस्तुहरू - तिनीहरूलाई स्थापना रद्द।
थप सफ्टवेयर प्रयोग
गर्न विशेष सफ्टवेयर हेर्न आफ्नो कम्प्युटर सफा। यी कार्यक्रम एक बटन थिचेर माथि वर्णन कार्यहरू गर्नेछ, र तपाईं पूर्ण शक्ति आफ्नो कम्प्युटर overclock गर्न अनुमति दिन्छ। एक कार्यक्रम जस्तै एउटा उदाहरण Auslogics BoostSpeed हुन सक्छ।
तपाईं माथि को सबै गरेको छ भने, र वृद्धि को इच्छित दर प्राप्त गरे, तपाईं वृद्धि उत्पादकता (जस्तै, उपकरण प्रतिस्थापन वा सञ्चालन प्रणाली को reinstallation) को थप जटिल विधिहरू हेर्न गर्नुपर्छ।
कसरी Windows7मा स्टार्टअप प्रोग्राम असक्षम: सम्भव तरिका।
कसरी "windose 8" कार्यक्रम हटाउन। विभिन्न तरिकामा हटाउँदै आवेदन
छिटो हार्दिक र स्वादिष्ट: चिकन संग द्वारा पूछे जाने रोटी को एक रोल।
Crankbaits र स्पिनर्स गर्न अनुभव Unhook
गठिया विशेषज्ञ - यो के हो? एक रोमेमोलोजिस्ट आवश्यक छ?
"Kalmatron": प्राविधिक विनिर्देशों र वर्णन
प्रारम्भिक गर्भावस्था मा गर्भावस्था को समयमा मासिक हुन सक्छ?
Photoshop सँग तस्बिरहरू कसरी मिलाउने?